Injifannoo WBO tii fi Waraanni TPLF Magaalaa Hawezeen qabachuu – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosInjifannoo WBO tii fi Waraanni TPLF Magaalaa Hawezeen qabachuu
Oduu Waxabajjii 05,2021|| Injifannoo WBO tii fi Waraanni TPLF Magaalaa Hawezeen qabachuu
Oromo Community Frankfurt, Germany #DuulaOromummaa #OromoProtests
-“Jirti manittiin tokko mana mootummaan godaa. Gaafa achi seenani, yaa ijoollishee kaa
kan alagaa maali innii firatu namaan ooda!” -Dubbii tana Haacaaluu Hundeessatitu Albuma duraa keessatti “GARAAN HAADHA BURREEDHA” jechuun waayee nama Mana hidhaa jiru, waayee Leenca hidhaa jiruu ilaalchisee roorroo jechaa fi gochaa isarra obbolootaa fi diinan irra ga’uu ilaalchisuun akkanatti ibse.
-Har’a osoo Jawaar ala jiraatee tokkoon ishee hamaa Jawaar Fbrratti barreessuu miti, miidiyaarratti dubbachuu miti, Siree ofiitirrattillee abjuu hamaa isaa yoo abjootte hirriiba malee tirban tokko bulti. Har’a garuu nama mana hidhaa keessa jirurratti odeessun dabeessummaa qofa miti, albaadhummaa fi doofummaadha.
-Haceen kana bareet, kana argeet waan bakka Leenci hinjirretti harreen taatu baree akkana jedhe. Eeyyee Dhuguma kan alagaa maal inni, kan gantuu fi ergamtuu maal inni…gaafa Qaallittii seenani, gaafa Karchallee seenani firruyyuu namaan hooda. Haceen dura deebiseefi….
-Dhimmi Jawaar M. akka gantuu fi hattuu dhimma garaa fi daabboo osoo hintaane, dhimma Oromoo fi Oromiyaati. Jawaar hidhamus Oromoo wajjini, bilisa ba’us Oromoo wajjini. Barri hindabartii hinhaftu, lammii hinganin yaa yartuu!!
Neetoon Tarkaaffii Waraanaa Itoophiyaa fi Ertiraa Irratti Fudhachuuf?
OROMIA11: ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ( ICC ) መከሰስና እና ኦሮሞ ፓለቲካ